စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ တွင် LEGO အစုံ၊ ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်အခမဲ့အသစ်များ
ပြက္ခဒိန်များ၊ ဒိုင်နိုဆောများ၊ ဘောလုံးကွင်းနှင့် Marvel minifigures ခေါင်းစဉ်များနောက်ထပ်ထုပ်ပိုးထားသောလ Lego စတင်ခြင်း၊ အခမဲ့လက်ဆောင်များနှင့်အွန်လိုင်းနှင့်ဆိုင်တွင်သီးသန့်ကမ်းလှမ်းမှုများ
စက်တင်ဘာလသည်သြဂုတ်လကဲ့သို့ထုတ်ဝေမှုအသစ်များအတွက်မပြင်းထန်သော်လည်း၊ အသစ်စက်စက်အသစ်စက်စက်များအကြားကျွန်ုပ်တို့၏ဆင်းရဲ၊ ဆိုးရွားသောဘဏ်စာရင်းများအတွက်အနားယူစရာမရှိသေးပါ။ Jurassic World set များ၊ ပြီးပြည့်စုံသော series များ Marvel စုဆောင်းရန် minifigures များနှင့်ဤနွေရာသီ၏နှောင်းပိုင်းတစ်ခုအပြင် Lego Star Wars: Mandalorian အကွာအဝေး
ဝမ်းသာစရာ၊ ထိုအရာများလုံခြုံရန်အခွင့်ကောင်းယူရန်ကမ်းလှမ်းချက်များစွာလည်းရှိသည် အသစ်အစုံ ၎င်းတို့အတွက်အပြည့်အဝပေးဆပ်ရသည့်အတားအဆီးအချို့ကိုယူသော minifigures များ။ ဒီမှာငါတို့လာမယ့်အရာအားလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ် Lego ယခုလတွင်အတည်ပြုပြီးသည်ဖြစ်စေ၊ လောလောဆယ်တွင်ကောလဟာလသာဖြစ်သည်။
လူကြီးများအတွက် LEGO ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona
မင်းဘောလုံးကိုအပြာရောင်နဲ့ garnet ကိုအနီရောင်နဲ့အဖြူရောင်ကိုပိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်aနဲ့စပ်လိုက်ပါ ငွေကြေးအကျပ်အတည်း၏အရိပ်အမြွက်, များအတွက် beeline ပါစေ ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona။ အဆိုပါ Lego အုပ်စုဒုတိယကွင်း (မနှစ်ကနောက် 10272 Old Trafford - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်) ၎င်း၏စျေးနှုန်းနှင့်အပိုင်းအစကိုပထမ ဦး စွာမြှင့်တင်ပြီး၎င်း၏ talisman ကစားသမားဆုံးရှုံးခဲ့သောကလပ်တစ်ခုအတွက်အချိန်တော်တော်လေးညံ့ဖျင်းသည်။
ဒါပေမယ့်ကိစ္စမရှိပါဘူး၊ Camp Nou ကအားကစားရုံတစ်ခုဖြစ်နေတုန်းဘဲ သမိုင်းနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ထိုက်တန်ပါတယ် မည်သည့်ဘာစီလိုနာပရိတ်သတ်အတွက်မဆို ထို့အပြင်ပထမဆုံး ၀ ယ်သူဖြစ်လာပါက deets အတွက်အောက်တွင်ကြည့်ပါ။
လူကြီးများအတွက် LEGO 40485 FC Barcelona အထိမ်းအမှတ်
စက်တင်ဘာ ၁ မှ ၁၂ အထိ (စတော့ရှယ်ယာများနောက်ဆုံး) ရှိနိုင်သည် LEGO.com နှင့် Lego စတိုးဆိုင်များမှ ၀ ယ်ယူသည် ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelonaဤ minifigure လေးလံသော GWP သည် Font de Canaletes (Canaletas Fountain) တွင်ပွဲစဉ်ဓလေ့ကိုမသေစေဘဲ၊ Barca ပရိသတ်များအသင်းအောင်ပွဲဆင်နွှဲရန် Barca ပရိတ်သတ်များစုဝေးကြသည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုကြီးမားသောဘာစီလိုနာအစုံအတွက်သင့်လျော်သောတွဲဖက်မှုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကြာရှည်မနေဖွယ်ရှိသည်။
အစုံများကို ပြန်၍ အရွယ်အစားပြောင်းသည်
အဆိုပါ Lego Group သည်ရှိပြီးသားအမျိုးအစားများအပါအ ၀ င်ပုံစံအသစ်ငါးမျိုးကိုစမ်းသပ်နေသည် 77940 တန်ခိုးကြီးသောဒိုင်နိုဆော နှင့် ၁၉၆၉ Fiat 77942ယူကေတွင်သီးသန့် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ အသေးစိတ်အားလုံးကိုစစ်ဆေးရန် (သို့) အုပ်စုများသို့တိုက်ရိုက်သွားရန်အောက်ပါလင့်များကိုနှိပ်ပါ LEGO.com:
၁၉၆၉ Fiat 77942
၇၇၉၄၃ မီးသတ်စခန်း Startသတ်မှတ်မည်
Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ 76391 Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု
နောက်ဆုံးပေါ် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ တိုက်ရိုက်စားသုံးသူအတွက်သီးသန့်ကမ်းလှမ်းမှုသည် Wizarding World ဆောင်ပုဒ်အတွက်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်၊ Hedwig နှင့်မှော်အရာ ၀ တ္ထုမျိုးစုံကိုအုတ်များဖြင့်အသက်သွင်းပေးသည်။ 76391 Hogw ကိုငါတို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပါarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု ဒီမှာ set ကိုစက်တင်ဘာ ၂ ရက် (သို့မဟုတ်စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်) တွင်မထုတ်လွှင့်မီ မြောက်အမေရိက).
LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို
အဆိုပါ စုဆောင်းထားသောအသေးစား ဆောင်ပုဒ်ကိုနောက်ဆုံးလက်ခံလိုက်ပါပြီ Marvel ပထမလေးလုံးမှအက္ခရာ ၁၂ လုံးဖြင့်ဤရောင်စုံတန်း၌ DisneyLoki, WandaVision, အပါအဝင်ဆိုလျှင် MCU ရှိုးများ ... Falcon နှင့်ဆောင်းရာသီစစ်သား ထွက်ခွာသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ် အနီးကပ်ကြည့်သည် 71031 Marvel စတူဒီယိုသြစတေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ တောင်ကိုရီးယားနှင့်ဂျပန် မှလွဲ၍ ယခုနေရာတိုင်းတွင်ရနိုင်သည်။ (သင်ထိုဒေသများတွင်အခြေစိုက်ပါကအောက်တိုဘာ ၁ ရက်အထိသင်စောင့်ရလိမ့်မည်။ )
Lego Star Wars 75319 The Armorer's Mandalorian Forge
သြဂုတ်လရဲ့အရာအားလုံးကိုသိပြီးပြီ Star Wars: The Mandalorian အစုံအပါအဝင်၊ 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder, 75312 Boba Fett's Starship နှင့် 75315 Imperial အလင်း Cruiser? အင်း၊ ဒီမှာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် 75319 The Armorer's Mandalorian Forgeတစ်ခုသတ်မှတ်ပါ၊ Lego Star Wars အဖွဲ့ မူလကဒီဇိုင်းလုပ်ချင်သည် ပြပွဲရဲ့ပထမဆုံးရာသီအတွက် ယခု Available ၂၇.၉၉ / ဒေါ်လာ ၂၉.၉၉ / € ၂၉.၉၉ ဖြင့်ယခုရနိုင်သောဤအမဲကွက်အစုံဖြစ်သည် ကောက်ရကျိုးနပ်သည်.
Netflix ၏ကာတွန်းစီးရီး Camp Cretaceous ကို အခြေခံ၍ စက်တင်ဘာ၌ dino-themed set အသစ် ၄ ခုသည်စင်ပေါ်သို့ရောက်ရှိလာသည်။ ဒိုင်နိုဆောတွေကဒါတွေကိုဖြတ်ပြီး Jurassic World အစုံအားလုံးသည်မျိုးစိတ်များနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသော်လည်းအရောင်အသစ် (သို့) အသစ်ဖြစ်သည် 76940 T. rex Dinosaur ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းပြပွဲဖြစ်ရပ်မှန်၊ စတိုင်၊ အသက်သာဆုံးဒီလှိုင်းအစုံသည်၎င်း၏အချက်များကိုယူသည် 21320 ဒိုင်နိုဆောကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း ပြတိုက်ပြပွဲတစ်ခုပြန်လည်တည်ဆောက်ရာတွင်
အသစ် ၄ ခုစလုံးကိုစစ်ဆေးရန်အောက်ပါလင့်များကိုနှိပ်ပါ Jurassic World အစုံ:
မတူကွဲပြားသောထွန်းကားသောပြက္ခဒိန်ငါးခုကိုမှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါပြီ LEGO.comသမိုင်းကဆက်သွားစရာရှိရင်သူတို့အားလုံးဒီဇင်ဘာမတိုင်ခင်ရှည်ကြာသွားလိမ့်မယ်။ မနှစ်ကပေါ့ Star Wars ပြက္ခဒိန် partလာဖို့ခက်တယ်၊ ဒါကြောင့်သင်ကဒီနှစ် Mando-themed ပွဲတော်တွေပြီးသွားရင်သေချာဖမ်းဖို့သေချာပါစေ 75307 Star Wars ထွန်းပြက္ခဒိန် အမြန်ဆုံး။ ဒီမှာငါးယောက်လုံးရဲ့ link တွေ
41690 Friends ထွန်းပြက္ခဒိန်
60603 CITY ထွန်းပြက္ခဒိန်
75307 Star Wars ထွန်းပြက္ခဒိန်
Lego Ideas 40487 Sailboat စွန့်စားမှု
ယခုနှစ်ဒုတိယနှစ်အတွက်စတော့ရှယ်ယာများစွာရှိသည် Lego Ideas 40487 Sailboat Adventure သည်စက်တင်ဘာ ၁၃ မှ ၃၀ အထိပြန်လာလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်လက်ဆောင်ပေးရန် ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုရယူရန်သင်£ ၂၀၀ / ဒေါ်လာ ၂၀၀ / € ၂၀၀ ကိုသုံးရန်လိုသေးသည် - ၎င်းသည်အကန့်အသတ်မရှိ GWP များကဲ့သို့အဘယ်ကြောင့်ရောင်းမထွက်သေးကြောင်းရှင်းပြနိုင်သည့်တံခါးခုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
Lego 5006746 လွှဲသင်္ဘောစီးနင်း
နောက်ထပ်ပြန်လာမယ့်ပရိုမိုရှင်း ၅၀၀၆၇၄၆ Swing Ship Ride ကို VIP အဖွဲ့ဝင်များအတွက်အနည်းဆုံး£ 5006746 / $ 85 / € 85 အကုန်အကျခံပြီးသီးသန့်ထပ်မံရရှိလိမ့်မည်။ LEGO.com နှင့် Lego စတိုးဆိုင်များ။ စက်တင်ဘာ ၆ မှ ၁၂ အတွင်းအာရှတစ် ဦး တည်းသီးသန့်ဖမ်းနိုင်လိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် ၄၀၄၈၇ ရွက်လွှင့်သင်္ဘောစွန့်စားမှုနှင့်အတူပျော်ရွှင်မှုရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဤအတွက်ပရိုမိုးရှင်းကာလ Lego စူပါမာရီယို ပိုးအိစံ သြဂုတ်လကုန်နှင့်စက်တင်ဘာလသို့ကျော်လွန်ခဲ့သည်။ £ 40 / $ 40 / € 40 သုံးစွဲမှုဖြင့်၎င်းကိုသင်ရလိမ့်မည် Lego စူပါမာရီယို ထုတ်ကုန်များ မှလွဲ၍ မာရီယိုနှင့်အတူ 71360 Adventures ကို နှင့် Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကိုစက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်အထိ
LEGO ကိုမင်းရဲ့ polybags တွေဖြစ်အောင်လုပ်ပါ
စက်တင်ဘာ ၂၀-၃၀ မှစ၍ အမေရိကန်၌ဒေါ်လာ ၅၀ နှင့်အထက်မည်သည့်ဆိုင်မှမဆို ၀ ယ်ယူပါက ၃၀၅၆၃ သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ခရုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ၃၀၅၆၄ သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် Monster တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီလိမ့်မည်။ အခြားနယ်မြေများသို့တူညီသောကမ်းလှမ်းမှုလာမည်လား၊ သို့သော်နှစ်ခုအခမဲ့ဖြစ်သည် ကွမ်းခြံကုန်း (40487 Sailboat စွန့်စားမှုအပြင်) အလွန်ကြိုဆိုလိမ့်မည်။
LEGO MASTERS ၏လျှို့ဝှက်ချက်များစာအုပ်
အဆိုပါ Lego MASTERS ၏လျှို့ဝှက်ချက်များစာအုပ်ကိုသြဂုတ်လတစ်လျှောက်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည် Lego Classic US တွင်သီးသန့်ဒေါ်လာ ၆၀ နှင့်အထက် ၀ ယ်ယူသည်။ ဒီတူညီတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုစက်တင်ဘာလအထိဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအခြားဒေသတွေမှာရောင်းချပေးမယ့်အချိန်ကိုမပြောသေးပါဘူး။
LEGO VIP သော့ချိတ်
သင်သည်အသင်းဝင်မဖြစ်သေးပါက Lego အခမဲ့အပြာရောင် VIP keychain သည်ဖောက်သည်အသစ်များအတွက်မက်လုံးတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေသေးသောကြောင့်ယခုအဖွဲ့၏သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်သည်စာရင်းသွင်းရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ ဟိ Lego VIP အစီအစဉ်သည်အခမဲ့ပါဝင်နိုင်ပြီးအနာဂတ်အော်ဒါများနှင့်သီးသန့်ဆုလာဘ်များအတွက် ၀ ယ်ယူမှုတိုင်းအတွက်အမှတ်များသင်ရလိမ့်မည်။
လူကြီးများအတွက် LEGO ၁၀၂၉၁ Queer Eye Apartမင်းလား
ပုံ - Carin Baer/Netflix
ကောလဟာလအသစ်တစ်ခုကိုအကြံပြုသည် လူကြီးများအတွက် Lego Netflix ၏ Queer Eye reboot ကိုအခြေ ပြု၍ Fab Five ၏ ၉၇၄ အပိုင်းများနှင့် minifigures များအပါအ ၀ င် Antoni Porowski, Tan France, Karamo Brown, Bobby Berk နှင့် Jonathan Van Ness တို့အပါအဝင်ဖက်ရှင်၊ ယဉ်ကျေးမှုအစရှိသောနယ်ပယ်အသီးသီးမှကျွမ်းကျင်သူများ အစားအစာနှင့်ပေါင် ၉၉.၉၉ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
Lego Ideas ၂၁၃၂၉ Fender Stratocaster
Tomáš Letenay ရဲ့ 'ငါတို့နားထဲမှာသီချင်း' ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့် စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် VIPs များအတွက် ၂၁၃၂၉ Black Stratocaster (အမည်နောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်) သည်အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပွဲမတိုင်မီဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆရသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်ကောလာဟလများ အတွဲအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀၀ စျေးနှုန်းကိုညွှန်ပြပြီး၎င်းကိုညွှန်ပြသည် Lego အဖွဲ့သည် Letenay ၏မူရင်း ၆၇၆ ပုဒ်တင်ပြမှုထက်ဂစ်တာနှင့် amp ကိုပိုအားထားခဲ့သည်။
အပ်ဒိတ်: ၂၁၃၂၉ Fender Stratocaster ယခုလတွင်အမှန်ပင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် - သို့သော်အစောပိုင်း VIP မိတ်ဆက်ပွဲ၏ကောလဟာလများသည်မမှန်ကန်ကြောင်းသိသာထင်ရှားသည်။ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှာစတာလင်ပေါင် ၈၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၉၉.၉၉ / € ၉၉.၉၉ နဲ့ရောင်းချမှာပါ။
ဆက်သွယ်ပါ Brick Fanatics at အကောင့်[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]